Apple na-ebelata ọnụahịa nke ncheta SSD na ụfọdụ Macs | Esi m mac
N'ụbọchị ndị a, ahịa maka Macbook Pro na-agba ọsọ. Obi abụọ na-ebilite mgbe niile n'ihe metụtara Macbook Pro M nwere mmasị ịzụrụ. Enwere ọtụtụ ajụjụ anyị na-ajụ onwe anyị gbasara arụmọrụ, ikike, ọnụahịa, nha yana enweghị ike, n'ihi na n'ọnọdụ ụfọdụ anyị enweghị ike ichere izu 3 ma ọ bụ 4 fọdụrụ iji nweta Macbook Pro ọhụrụ.
Anyị na-ezo aka na nhazi nke akụrụngwa nke anyị nwetara site na Apple. Mgbe anyị họrọla ihe atụ achọrọ, mgbe ịzụrụ ihe na-enye anyị ohere ịbawanye oke ụfọdụ: RAM nchekwa ma ọ bụ ikike diski ike. Na nke a anyị na-ezo aka na nke ikpeazụ.
Ọ bụrụ na ị ga-enyocha ọnụọgụ ole na ole iji mee mkpebi ziri ezi, taa anyị maara nke ọhụrụ. Apple adịghị eweda Apple gara aga ala, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ruo ugbu a, mana ọ na-eme na-ebelata ọnụahịa ọ na-efu iji kwalite ebe nchekwa SSD site na Macs ochie. Mbelata a metụtara MacBook Air, Mac Pro, iMac na Mac mini nke afọ gara aga.
Ma Mbelata ọnụahịa anaghị eme nhatanha na ụdị niile: na nke nke Macbook Pro ihe nlele 512 Gb SSD na-efu € 200, ya bụ, ego a bụ € 100. Otu na-aga n'ihi na MacBook Ikuku, ma na nke a ịga 512 Gb na-efu € 250 ọzọ. Banyere Mac Obere, ọnụahịa ndị ahụ bụ € 200, tupu € 300, maka mbipute 512 Gb na € 600 ma ọ bụrụ na anyị ahọrọ ụdị 1 Tb, nke na-eribu € 800. A na - ahụ akụkụ na - adịghị mma na 2015 Macbook Pro, ebe ọ bụ naanị Mac nke na - anaghị agbanwe ọnụahịa ahụ.
N'ihe banyere iMac, thedị 27-inch nke nwere 5k ihuenyo dị oke ọnụ karịa € 400 ma ọ bụrụ na anyị chọrọ 512 Gb SSD, mgbe ọnụahịa ya gara aga bụ € 500. N'okwu a, ọ bara uru ịnwe 1 Tb SSD ka anyị ga-akwụ ụgwọ € 500 ọzọ, naanị € 100 karịa ihe atụ 512 Gb na € 100 na-erughị ọnụahịa mbụ ya.
N'ikpeazụ, Mac Pro O nwere mmebawanye ego nke € 200 na € 600 maka 512 Gb na 1 Tb n'otu n'otu. Enwere ike ịzụta ikike a na € 300 na € 800 n'otu n'otu maka 512 Gb na 1 Tb.
N'uche m, ọ bụ nhọrọ amamihe dị na Apple maka inwe ọtụtụ ụzọ maka ndị ahịa iji kpebie ma ghara ịmanye ha ịzụrụ ihe kachasị ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple na-ebelata ọnụahịa nke nchekwa SSD na ụfọdụ Macs